Inona no ataon'ny anjely Guardian?
Fivavahana & Spirituality Fampidirana
Inona avy ireo anjely mpiambina?
Raha mino ireo anjely mpiambina ianao, dia manontany tena ianao hoe inona avy ireo andraikitra masin'Andriamanitra manatanteraka ireo asa sarobidy ireo. Ireo olona manerana ny tantara voarakitra dia naneho hevitra mahavariana momba ny zavatra tahaka ny anjely mpiambina sy ny karazana asa maro samihafa ataon'izy ireo.
Ireo anjelin'ny mpiambina manara-maso ny olona mandritra ny androm-piainany manontolo eto an-tany, ireo fomba amam-panao ara-pivavahana maro samihafa.
Ny filozofia grika tranainy dia nilaza fa voatendry ho an'ny olona tsirairay ny fanahy mpiambina, ary toy izany koa ny Zoroastrianisma. Ny finoana ny anjely mpiambina izay miampanga an'Andriamanitra amin'ny fikarakarana ny fiainan'ny olombelona dia ampahany manan-danja amin'ny Jodaisma , Kristianisma ary Silamo .
Fiarovana ny olona
Araka ny hevitr'izy ireo, dia matetika ny anjely mpiambina no miasa amin'ny fiarovana ny olona amin'ny loza. Ireo Mesopotamiana fahiny dia nijery ireo fanahy mpiambina antsoina hoe shedu sy lamassu mba hiarovana azy ireo amin'ny ratsy. Ao amin'ny Matio 18:10 ao amin'ny Baiboly, dia nilaza i Jesosy Kristy fa misy anjely mpiambina miaro azy ireo. I Mystic sy mpanoratra Amos Komensky, izay niaina nandritra ny taonjato faha-17 dia nanoratra fa Andriamanitra dia nanendry anjely mpiaro mba hiaro ny ankizy "amin'ny loza rehetra sy ny fandrika, ny lavaka, ny amboadia, ny fandrika ary ny fakam-panahy." Ny olon-dehibe anefa no mahazo tombontsoa amin'ny fiarovana ny anjely mpiaro , hoy koa ny Bokin'i Enoka, izay tafiditra ao amin'ny soratra masina an'ny Fiangonana Orthodox Ethiopiana Tewahedo.
1 Enoka 100: 5 dia milaza fa Andriamanitra dia "hametraka ny anjely masina eo amin'ny olo-marina rehetra." Hoy ny CORAN ao amin'ny Al Ra'd 13:11: "Ho an'ny olona [tsirairay] dia misy anjely eo anoloany sy any aoriana izy, izay miambina azy amin'ny baikon'i Allah. "
Mivavaha ho an'ny olona
Ny Anjely mpiambina anao dia mety mivavaka tsy tapaka ho anao, mangataka amin'Andriamanitra hanampy anao na dia tsy mahafantatra aza ianao fa misy anjely iray mivavaka amin'ny anaranao.
Hoy ny Katesizin'ny Fiangonana katolika : "Hatramin'izao ka hatramin'ny fahazazany, ny ain'olombelona dia voahodidin'ny fiahiana sy ny fitsanganany." Mino ny Bodista fa antsoina hoe bodhisattvas izay mijery ny olona, ​​mihaino ny vavaka ataon'ny olona, ​​ary mandray anjara amin'ny soa hevitra izay hivavahan'ny olona.
Ny anjely Guardian koa dia mety hitarika ny lalanao eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny Eksodosy 32:34 ao amin'ny Torah Andriamanitra dia mitantara an'i Mosesy rehefa manomana ny hitarika ny vahoaka hebreo ho any amin'ny toerana vaovao i Mosesy: "Handeha eo alohanao ny anjeliko." Hoy ny Salamo 91:11 ao amin'ny Baiboly momba ny anjely: "Fa Izy [ Andriamanitra] dia handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao amin'ny làlanao rehetra. "Ireo asa soratra amin'ny literatiora indraindray dia naneho ny hevitry ny anjely mahatoky sy lavo izay manome tari-dalana tsara sy ratsy. Ohatra, tamin'ny taonjato faha-16 tamin'ny The The Tragic History of Doctor Faustus, dia nisy anjely tsara sy anjely ratsy, izay nanolotra torohevitra mifanohitra.
Ny olona maro ao amin'ny finoana dia mino fa ny anjely mpiambina dia mirakitra ny zavatra rehetra eritreretin'ny olona sy lazainy ary ataony mandritra ny androm-piainany ary avy eo mametraka ny fampahalalana miaraka amin'ireo anjely ambony (toy ny hery ) mba hampidirana ao amin'ny firaketana ofisialy an'izao tontolo izao. Ny Islam sy ny Sikhism dia samy miteny fa samy manana anjely roa mpiambina ho an'ny fiainany eto an-tany ny tsirairay ary ireo anjely dia mirakitra ny asa soa sy ratsy ataon'ilay olona.
Mianara momba ilay anjelin'ny fahafatesana
Angel Colors: Ilay Hazavana Mena Mena mitondra ny arakanjely Uriel
Ny arkanjely Michael sy ny anjely Guardian dia manainga fanahy ho any an-danitra
Ny fomba hiarovana ny tenanao amin'ny anjely lavo (demonia)
Ahoana ny ataon'ny anjely Guardian mikarakara zanaka?
Ireo karazana anjely amin'ny Jodaisma
An'arivony ireo anjely ao amin'ny Anjerimanontolon'ny kristianina kristianina
Hevitra fototra amin'ny tantaran'ny fiteny Anglisy
Famoriana ny Fahatsiarovana an'i Elvis Presley sy ny Kolontsaina
Ny anaran'ny anarana RICHARDSON sy ny tantaram-pianakaviana
Mary, Mpanjakavavin'ny Scots, amin'ny sary
Fanamboarana mahazatra sy fanamarinana mahitsy
Thylakoid famaritana sy asa
Ny adihevitra tao Lincoln-Douglas tamin'ny 1858
Ny tantaran'ny Firaisam-be Eoropeana
Fampidirana ny hazo baoritra
University of Texas ao amin'ny Dallas Admissions
Ny fahavaratra alohan'ny taona voalohany amin'ny Sekolin'ny lalàna
Lazao ny taombaovao! Fihetseham-po mahatsikaiky manandratra ny fankalazana
Sosialy ho an'ny lohahevitra tsirairay
Most Plastics Common
Manàna ny fon'ny vehivavy Gemini
Ireo mpitarika ambony 10 lehibe indrindra an'ny mpitondra teo aloha